Tenisy – «Open international BMOI »: hifandona amin’ny Frantsay i Miary Zo sy i Ando | NewsMada
Tenisy – «Open international BMOI »: hifandona amin’ny Frantsay i Miary Zo sy i Ando
Efa miditra ao anatin’ny dingana famaranana, ankehitriny, ny “Open international”, taranja tenisy. Fifaninanana, tohanan’ny BMOI sy ny Air France. Hiatrika manasa-dalana ny eo amin’ny olon-droa vehivavy sy lehilahy.
Mitohy hatrany ny fifaninanana iraisam-pirenena, eo amin’ny taranja tenisy “Open international BMOI / Air France”. Lalao tanterahina, eny amin’ny kianja Country Club Ilafy. Miditra eo amin’ny manasa-dalana ny eo amin’ny olon-droa miaraka lehilahy sy vehivavy, amin’ity alakamisy 11 oktobra ity.
Anisan’ny fihaonana goavana amin’izany ny fifandonan’i Ando sy i Miary Zo amin’ireo frantsay mirahalahy, i Quennessen Louis sy i Reynet Florian. Hiezaka hanohitra ireto vazaha, efa manana traikefa sy manana laharana ambony, ireto i Mary Zo sy i Ando, amin’ity. Raha tsiahivina, lavon’ireo Frantsay, tamin’ny seta 2 no ho 0 (6/2 ; 6/3), Rakotomahavonjy Patrick sy i Mbolanirinia Hasina.
Nivoaka sempotra kosa i Miary Zo sy i Ando vao nahazo ny tapakila hiatrehany ny manasa-dalana, raha nifandona tamin-dRadison Donné sy i Romeo Giovanni. Seta 2 no ho 1 (3/6 ; 6/3 ; 10/4) ny nisarahan’ny roa tonta.
Adin’ny samy Malagasy kosa
Fifanandrinan’ny samy Malagasy kosa ny manasa-dalana iray: ny fihaonan’i Andritoavina sy i Andritokiana amin’ireo mpilalao mpila ravinahitra, i Antso (Frantsa) sy i Jacob (Maorisy). Hafana vay ihany koa ny fihaonan’izy ireto satria ny samy andrarezina no hidona. Teo amin’ny ampahefa-dalana, resin-dry Andritoavina, tamin’ny seta 2 no ho 0 (6/4 ; 6/1), i Rado sy i Patrick.
Ankoatra izay, teo amin’ny vehivavy, hifanehatra amin’ireo Frantsay, i Girard Rachel sy i Busson Elodie, eo amin’ny ankatoky ny famaranana, ihany koa Andriamadison Finaritra sy i Tsantaniony Iariniaina.
Teo amin’ny lalao ho an’olon-tokana vehivavy, tafita amin’ny ampahefa-dalana i Safidisoa Nomenjanahary rehefa nandresy an-dRakotohasy Elsie, tamin’ny seta 2 no ho 0 (6/2 ; 6/1). I Tsantaniony Iariniaina indray, nandavo an’Andrianantoandro Miora (6/0 ; 6/2) ary Raoilison Miora, nanilika an-dRakotoarilala Randy, tamin’ny seta 2 no ho 1 (3/6 ; 6/1 ; 7/5).